Maxay tahay sababta loo bedelay garsoorihii ku qornaa inuu dhex-dhexaadiyo kulanka Chelsea iyo Leicester City? – Gool FM
(London) 18 Agoosto 2019. Maamulka horyaalka Premier League ayaa sabab qariib ah darteed lagu qabsay inay bedelaan garsoorihii ku qornaa kulanka caawa ee Chelsea iyo Leicester City.
Garsoorihii ku qornaa inuu seeriga u qabto kulanka Chelsea ay la dheelayso Leicester City ee horyaalka Premier League ayaa awoodi waayey inuu soo gaaro garoonka Stamford Birdge oo uu kulanku ka dhacayey ka hor inta aysan ciyaari bilaaban.
Waxa uu ahaa garsoore Graham Scott waxaana hakad geliyey oo uu ku soo daahay isku socodka gaadiidka oo ahaa mid aad u mashquul badan oo xiriir ah, taasoo noqotay in garsooraha afaraad ee Oliver Langford uu bedelo booskiisa oo uu dhex-dhexaadiyo kulanka ka soconaya garoonka Stamford Bridge.
Sharciga u yaala horyaalka Premier League ayaa dhigaya inuu garsooraha waqti hore soo galo garoonka isla markaana uu sameeyo is kululeyn dhammaystiran ka hor inta uusan dhex-dhexaadin kulanka.
Garsoore Graham Scott ayaa ku soo daahaday gaadiidka Magaalada oo aad xiriir ah ahaa inuu uu ku soo jeeday garoonka Stamford Bridge, waxaana uu isagu ahaa garsooraha fadhiyey alladda VAR kulankii xalay barbaraha 2-2 ku dhammaaday oo ay wada dheeleen Manchester City iyo Tottenham.
Scott ayaana ahaa garsoorihii u sheegay Michael Olivier in kubadda uu gacan ku taabtay Laporte ka hor inta uusan Jesus goolka dhalin dhammaadkii ciyaarta.
Waxa uu 51-sano jirkaan ku qornaa inuu garsooro kulanka caawa dhexmaraya kooxaha Chelsea iyo Leicester City, balse waxa uu garoonka soo gaaray daqiiqado yar ka hor inta aan la baasan ciyaarta, taasoo ka dhigtay in laga talo baxo.